Jimaata darbe Sudaan biyya sadaffaa hariiroo Israa’el waliin jiru haaressuuf tarkaanfii fudhatte keessaa taate jirti. Abudaabii biyya Israa’el waliin dhiyeenya walii galtee irra geesee tuuristoota Israa’eliif duruu hoteelota itti keessummeessaman beeksisuu jalqabde, faallaa isaa walii galteen Sudaan waliin irra ga’ame mormii uummataa hanga tokko dabalatee guru hedduun isa mudatee jira.
Sudaan waliin hariiroon jiru haara’uu isaa kan beeksisan muummicha ministeeraa Israa’el Benjamin Netanyaahuu turan.Netanyaahuun kun nageenyaaf injifannoo ajaa’ibaa fi bara 1967 keessa yeroo sadii Sudaan biraa hin ta’u Israa’el waliin nageenyi hin jiru, Israa’el waliin mareen hin jiru fi Hariiroon gaariin Israa’el waliin jiru hin haara’u kan jedhu gara deeii tole jedhu sadiitti jijjiirame jedhan.
Sudaan Israa’el West Baankii fi Gaazaa weeraruu ishee kan baaaleffatte yoo ta’u filisxeem biyya ofii ishee akka taatu naannoo Sanaa gad dhiistee ba’uu qabdi jettee jirti. Sudaan Israa’el waliin araara buusuuf tokkummaa Emireetota Arabaa fi Baahireeniin kan hordofte yoo ta’u Prezidaant Doonaald Tramp akka jedhanitti yoo xiqqaate biyyoonni shan itti aanu jedhan. Israa’el biyyattiin dinagdee fi qabeenyaa boba’aan badhaatuu taate Saaud Arabiyaan kanneen keessa tokko jettee abdatti.
Sudaan keessaa halli isaa xiqqoo wal xaxaa dha. Lammiiwwan Sudaan hedduun Israa’el waliin hariiroo jiru bakkatti deebisuu isa jedhu alaabaa Israa’el daandii Kaartum irratti gubuu dhaan mormii isaanii mul’isaii jiru.